UMvikeli woMphakathi uzokhipha umbiko ngezindleko zomgcwabo kaMandela – LIVE Express
UMvikeli woMphakathi uzokhipha umbiko ngezindleko zomgcwabo kaMandela
UMvikeli woMphakathi u-Adv. Busisiwe Mkhwebane kulindeleke ukuba akhiphe umbiko ngoMsombuluko ngophenyo obelwenziwa mayelana nezinsolo zokungasetshenziswa kahle kwezimali zomphakathi, ukungaphathi ngendlela kanye nokuphatha ngendlela enganakho ukwethembeka.
Lezi zinsolo zibhekene nohulumeni wesifundazwe e-Eastern Cape kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni mayelana nezindleko ezadaleka ngesikathi kulungiselelwa umngcwabo walowo owayenguMengameli waseNingizimu Afrika uNelson Rolihlahla Mandela.
FUNDA NALOLU DABA: I-DA ifuna i-NPA ibeke ngokushesha uZuma amacala
Ngaphambilini kwaba nemibiko kwabezindaba yokuthi uhulumeni wesifundazwe kulesiya sifundazwe wawungayilandeli imigomo nemugudu yokukhishwa kwamathenda ngesikhathi kulungiselelwa umgcwabo walowo owayengumengameli ngaphambilini. Kwaphinda kwavela nezinsolo zokuthi enye imali yasetshenziselwa umkhankaso we-ANC e-Eastern Cape.
Kodwa-ke i-ANC esifundazweni yaziphika lezi zinsolo.